खाना किन जरुरी छ ? | Ratopati
यो प्रश्न गर्ने हो भने धेरैको एउटै उत्तर हुने गर्छ । त्यो हो– ‘हाम्रो भोक मेट्न’ । के हामीलाई खाना भोक मेट्न मात्र जरुरी छ ? या त यसको अन्य अरु पनि काम छ त ?
वास्तवमा यस संसारका हरेक जीवित प्राणीहरुलाई खाना जरुरी छ । हाम्रो शरीरलाई एउटा मोटर गाडीसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसरी मोटरलाई गुड्नको लागि तेल वा पेट्रोल चाहिन्छ, त्यसैगरी हामीलाई पनि काम गर्नको लागि खाना चाहिन्छ । हामी दिनभरि धेरै कामहरु गर्ने गर्छौ । यसरी काम गर्दा हाम्रो शरीरलाई तागत चाहिन्छ । शरीरलाई तागत दिने काम नै खानाले गर्छ ।
हाम्रो शरीरमा खानाको मात्रा कति छ भन्ने कुरा हाम्रो दिमागले जाँचिरहेको हुन्छ । शरीरमा खानाको मात्रा सन्तुलित छ भने हाम्रो दिमागले हाम्रो पेट र आन्द्राहरुलाई निष्क्रिय पार्छ । जब हाम्रो शरीरमा खानाको अभाव हुन्छ, हाम्रो दिमागमा त्यसको खबर पुग्छ । शरीरमा खानाको मात्रा कम हुने बित्तिकै हाम्रो पेट र आन्द्राहरुलाई दिमागले सक्रिय बनाइदिन्छ । त्यसपछि हामीलाई भोक लाग्छ । यदि हामीले भोक लागेर पनि केही खाएनौं भने हामी जीवित रहन सक्तैनौ । हाम्रो शरीरको विकास रोकिन्छ र हामीमा काम गर्ने जोस, जाँगर र तागत रहँदैन । हाम्रो शरीरको विभिन्न भागहरुले पनि काम गर्न छाड्छ ।
हामी खाने खानामा विभिन्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् । त्यही भएर वैज्ञानिकहरुले हाम्रो शरीरलाई स्वास्थ्य रहन के के तत्व कति मात्रामा चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गरेका छन् । त्यसैले स्वस्थ रहन खाना खाएर मात्र पुग्दैन् । हामीले हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न कामको लागि विभिन्न तत्व सही मात्रामा खानु पनि जरुरी छ ।
ती तत्वहरुमा प्रोटिन पनि पर्छ । प्रोटिनले हाम्रो शरीरमा नयाँ कोषहरुको निर्माणमा सहयोग गर्छ । प्रोटिन बिना हाम्रो शरीरको विकास क्रम रोकिन्छ । दुध, अण्डा, मासु, चिज र माछामा प्रोटिन पाइन्छ । अर्को तत्व कार्बोहाइड्रेटले हाम्रो शरीरलाई तागत दिने काम गर्छ । कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भएको खानाहरुमा पाइने गर्छ । जस्तै आलु, आँटा, चामल, चिनी आदि ।
यति मात्र होइन हाम्रो शरीरलाई खनिज पनि चाहिन्छ । विभिन्न १८ प्रकारका खनिजहरु हामीलाई चाहिन्छ । उदाहरणको लागि क्याल्सियम र फोसफोरस हाम्रो शरीरको हाड र दाँतको मजबुत विकासको लागि चाहिन्छ । फलामले हाम्रा कोषहरुलाई सही काम गराउँनमा मदत गर्छ । हाम्रो शरीरले तामाको मदतले रगतलाई रातो पार्ने र अक्सिजन लिने हेमोग्लोबिन बनाउने गर्छ । आयोडिनले पनि विभिन्न कामहरुमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।
के हाम्रो शरीरलाई यति मात्र तत्वहरु चाहिन्छ त ? होइन, विज्ञानले हाम्रो शरीरलाई भिटामिन पनि चाहिने कुरा पत्ता लगाएको छ । भिटामिनले पनि स्वस्थ रहन ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । हरेक भिटामिनले शरीरमा भिन्न भिन्नै काम गरिरहेको हुन्छ । समग्रमा यसले हाम्रो शरीरको विकास गर्न हामीलाई मानसिक रुपमा दह्रो पार्न मद्दत गर्छ । त्यसै गरी हामीलाई पानी पनि आवश्यक छ । हामीलाइ थाहा नै छ, हाम्रो शरीरको ७० प्रतिशत भाग पानीले बनेको हुन्छ । रगतको तरलपनालाई कायम राख्न र अन्य विभिन्न कामहरु गर्न यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ ।
यसबाट हामी के थाहा पाउँन सक्छौ भने खाना भनेको हाम्रो भोक मेटाउन मात्र खाने होइन । हामीलाई सही र सन्तुलित खाना स्वास्थ्य रहनको लागि पनि आवश्यक हुन्छ ।
Title Photo: https://media.philstar.com